Universiade: vonona ny ao Ambositra | NewsMada
Universiade: vonona ny ao Ambositra
Hotanterahina ao amin’ny IST Ambositra ny “Universiade”, ny 19 ka hatramin’ny 24 novambra izao. Efa vonona tanteraka ny mpikarakara sy ny mpandray anjara rehetra. Hampiavaka ity andiany fahefatra ity ny fisian’ny fanatanjahantena fihetsiketsehana toy ny savika, mampiavaka ny faritra Amoron’i Mania. Eo koa ny sokela eo amin’ny lafiny kolontsaina, mampiavaka ny Betsileo.
Handray anjara avokoa ireo oniversitem-panjakana enina sy ireo IST telo. Hisy ny fandraisan’anjaran’ny oniversite tsy miankina toy ny Imgam sy ny INSPNMad sy ireo oniversite tsy miankina hafa.
Maro ireo taranja hifaninanana. Anisan’izany ny lalao baolina kitra, ny baskety, ny volley, ny hand, ho an’ny vehivavy sy lehilahy. Ankoatra ireo ny fifaninanana hazakazaka, ny tsipy kanetibe, ny tenisy ambony latabatra, ny judo, ny karate, sns. Eo amin’ny lafiny kolontsaina kosa, hisy ny lalao fifaninanana toy ny katro, ny fanorona, ny sokela….
Fotoana hamohazana ny talenta sy ny fahaiza-manaon’ny tanora ny “Universiade”. Tsy tokony hohadinoina ny firahalahiana anaty fanatanjahantena sy kolontsaina na efa eny amin’ny oniversite aza ireo tanora.
Betsaka rahateo ireo tanora manan-talenta sy mahavita zavatra ary hanasongadinana izany fahaizana izany tsara ny hisian’ny fifaninanana toy izao.